Cabsi soo wajahday Soomaalida ku nool S/afrika. | KEYDMEDIA ONLINE
Cabsi soo wajahday Soomaalida ku nool S/afrika.
Mogadishu(KON) Wararka laga helayo wadanka S/Africa ayaa sheegaya in lagu dilay dhalinyaro Somaaliyeed kuwaas oo si weyn oga naxeen Soomaalida ku dhaqan dalkaas.
Dilka 2 dhalinyarda somalida ayaa loo adeeg saday gaari si bareera loo jiirsiiyey xili ay ku sugnayeen duleedka Magalada Cape Town, iyadoona somalida halkaasi ku nool ay la soo daristay cabsi tii ugu xumeyd.
Dhacdadaani ma ahan mid ku cusub soomaalida qaxootiga ku ah wadankaasi ayadoona horay wiil soomaaliyeed dhagax lugu dilay isla magaalada Cape Town mana jirto cid si rasmi ah uga hadashay dhibaatada joogtadaa ee lagu hayo Soomaalida wadankooda uga cararay dirirta Colaadeed.